गर्भनिराेधक चक्कीसँग कति भर पर्ने, भर्खरै विवाहित महिलाले के गर्ने ? - Purbeli News
गर्भनिराेधक चक्कीसँग कति भर पर्ने, भर्खरै विवाहित महिलाले के गर्ने ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २१, २०७७ समय: १८:१०:३८
महिलाले परिवार नियोजनका लागि गर्भनिरोधक चक्कीहरू प्रयोग गर्छन् । तर धेरै महिलाहरूको दिमागमा एउटा शंका उब्जिन्छ कि यस्ता औषधिहरुले साइड इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन ? त्यसको प्रयोग गर्ने सही तरिका के हो ? त्यसलाई कतिन्जेल उपभोग गर्न सकिन्छ ?
त्यहाँ उपभोगका कारण महिलाको मासिक चक्र प्रक्रियामा कुनै समस्या हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा यदि यी प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएन भने यिनीहरु नै तनावका कारण बन्न सक्छन् । तसर्थ, उनीहरूको जानकारी समयमै प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रजनन् प्रणालीको लागि गर्भनिरोधक चक्की
महिलाले गर्भ निरोधक औषधि लिँदा महिलाको अण्डाशयबाट बाहिर निस्किने गर्भवती गराउने तत्व केही समयको लागि रोकिन्छ । यही कारणले गर्दा गर्भ बस्दैन ।
यी औषधि लिने सही तरीका
यदि कुनै महिलाले पहिलो पटक यो औषधिको प्रयोग गरेकी छन् भने आफ्नो महिनावारीको दोस्रो दिनबाट नियमित रुपमा औषधि लिन सुरु गर्नुपर्छ । यस्तो औषधि एक प्याकेटमा २१ वटा हुन्छ र यी २१ चक्की लिइसकेपछि शरीरलाई एक साताको लागि ब्रेक दिन सकिन्छ ।
बीचमा एक दिन औषधि लिन पाइएन भने ?
यदि कुनै महिलाले बीचमा औषधि लिन बिर्सिहालिन् भने सम्झिएपछि तुरुन्त यस्तो औषधि लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि तपाईंले हिजो औषधि लिन भुल्नु भएको थियो र आज बिहान सम्झिनुभयो भने बिहानै औषधि लिइहाल्नुपर्छ । सामान्यतया यस्तो औषधि साँझमा लिनुपर्छ । दिमागमा राख्नुहोस् कि यस्तो लापरवाहीको कारण औषधिहरूको प्रभाव कम हुन सक्छ ।
के भर्खरै विवाहित महिलाले यो औषधि लिनुपर्छ?
यो विधि परिवार नियोजनको लागि धेरै सुरक्षित छ र यदि उनीहरूले यी औषधि खान बन्द गरे भने तिनीहरू सजिलै पछि गर्भधारण गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा यदि नवविवाहित महिलाले यो खान्छिन् भने पनि यो औषधि खान छाडेपछि उनीहरुलाई गर्भवती हुन कुनै कठिनाइ हुँदैन ।
यी औषधिहरू कहिलेसम्म लिन सकिन्छ ?
विज्ञहरूले ती औषधि ५ वर्षसम्म लिनुलाई सुरक्षित ठानेका छन् । तर उनीहरूले समय समयमा केही परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै समयसम्म उपभोग गर्ने महिलाले खुट्टाको नसामा रगत जम्ने जस्ता समस्या देख्न सकिन्छ ।
यस्तो औषधिको साइड इफेक्ट?
केही महिलाहरूलाई यो औषधि उपभोगको समयमा टाउको दुख्ने, नोजिया वा मतलीजस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पछाडि कारण यो हो कि यी औषधिहरूले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको मिश्रण समावेश गरेको हुन्छ । जसको कारण यी समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् ।
के वजन बढ्नु पनि यसको साइड इफेक्ट हो ?
जसरी हामीले यो पनि भनेका छौं कि एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनहरू यसभित्र पाउन सकिन्छ । पहिले यी चक्कीहरुमा दुई तत्वको प्रधानता पाउने गरिएको थियो । जसको कारण शरीरमा पानी प्रतिधारणको समस्या थप हुँदै गयो । यस समस्याको कारण महिलाहरूको वजन बढ््न थालेको उनीहरुमा भ्रम हुने गर्छ ।
आइपिलको उपयोग ?
आईपिललाई गर्भनिरोधक चक्कीको रूपमा प्रयोग गर्ने महिलाले यो चक्कीलाई आकस्मिक रुपमा लिनुपर्छ । यी चक्कीहरूको प्रयोगका साथ शरीरमा हार्मोनहरू असन्तुलित हुन्छन् र भ्रूणलाई एक्टोपिक गर्भावस्थामा विकसित गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा महिलाले डाक्टरको सल्लाहमा मात्र आईपिलको प्रयोग गर्नुपर्छ ।